"ချစ်သူကို SURPRISE လုပ်ဖို့သွားရာမှ မျက်ရည်လည်ရွဲဖြစ်ကာ ကြေကွဲခဲ့ရတဲ့ ကောင်လေး …" - BaHuThuTaGabar
June 13, 2019 admin နိုင်ငံတကာသတင်း, အချစ်ရေး 0
နှလုံးသား အရေးမှာ ရင်နင့်နေအောင် ချစ်ရတဲ့ ကိုယ့်ချစ်သူလေးက တခြားတစ်ယောက်နဲ့ သစ္စာဖောက်နေတယ်ဆိုတဲ့ အဖြစ်အပျက်မျိုးလောက် ဘယ်အဖြစ်အပျက်ကမှ ကြေကွဲစရာ မကောင်းပါဘူး။
ကိုယ်နဲ့တွေ့ရင်တော့ အကောင်း၊ နောက်ကွယ်မှာတော့ တခြားတစ်ယောက်နဲ့ ကိုယ်ထက်တောင် ကြည်နူးနေသေးတယ် ဆိုတာမျိုးက တွေးမကြည့်ရဲလောက်အောင် ဆိုးရွားလွန်းလှပါတယ်နော်။
အကယ်၍ ချစ်သူလေးကို အံ့သြသွားစေဖို့ သူမသိအောင် သွားတွေ့ကာမှ သူကတော့ တခြားတစ်ယောက်နဲ့ ချစ်ကြည်နူး တစ်တီတူးနေတဲ့ မြင်ကွင်းကို မျက်ဝါးထင်ထင်တွေ့လိုက်ရရင် သင်ဆိုရင် ဘာလုပ်မယ်လို့ တွေးမိသလဲ
ဒီအဖြစ်အပျက်ကို ကိုယ်တွေ့ကြုံခဲ့ရသူကတော့ Ken Wong ဆိုတဲ့ လူငယ်လေးပါပဲ။ Ken Wong ဟာ ဇွန်လ ၄ ရက်နေ့မှာ ကျရောက်တဲ့ ချစ်သူကောင်မလေး မွေးနေ့အတွက် ပန်းစည်းလေးကိုင်ပြီး surprise လုပ်ဖို့အတွက် မသိအောင် ကောင်မလေးတိုက်အောက်ကို သွားခဲ့ပါတယ်။
ပန်းစည်းတောင် ရိုးရိုးမဟုတ်ဘဲ ပိုက်ဆံတွေထည့်ထားတဲ့ ပန်းစည်းလေးပါတဲ့….
ဒါပေမဲ့လည်း အိမ်အောက် ကားပါကင်ကို ရောက်တဲ့အခါ Ken Wong ကို သူချစ်လှပါချည်ရဲ့ဆိုတဲ့ ကောင်မလေးက တခြားကောင်လေးကို ခွပြီး အကြာကြီးဖက်ကာ ကြည်နူးနေတဲ့ မြင်ကွင်းလေးက ဆီးကြိုလို့နေခဲ့ပါတယ်။ ရင်ဝဆောင့်ကန်လိုက်သလိုပါပဲ။
Surprise လုပ်မှာဆိုတော့ အစောကြီးကတည်းက Ken Wong က သူ့ဖုန်းနဲ့ ဗီဒီယိုရိုက်ကာ မှတ်တမ်းတင်ဖို့ကို တစ်ခါတည်းပြင်ဆင်သွားခဲ့တာပါ။ ဒါကြောင့်လည်း ဒီအဖြစ်အပျက်တစ်ခုလုံးကို မှတ်တမ်းတင်နိုင်ခဲ့တာပေါ့။
အစကတော့ အံ့သြပြီး မယုံကြည်နိုင်သလိုဖြစ်ကာ ရယ်နေခဲ့ပေမယ့်လည်း ခဏအကြာမှာပဲ ခံစားချက်တွေ ထိန်းမရတော့ဘဲ မျက်ရည်တွေ အလိမ်းလိမ်းကျကာ ကြေကွဲပါတော့တယ်။
ဒီအဖြစ်အပျက်ကို Ken Wong ကိုယ်တိုင် Twitter မှာ တင်ထားခဲ့တာဖြစ်ပြီး သူ့ရဲ့ Tweet post လေးနဲ့တကွ ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ရပါတယ်။
ခဈြသူကို SURPRISE လုပျဖို့သှားရာမှ မကျြရညျလညျရှဲဖွဈကာ ကွကှေဲခဲ့ရတဲ့ ကောငျလေး …..
နှလုံးသား အရေးမှာ ရငျနငျ့နအေောငျ ခဈြရတဲ့ ကိုယျ့ခဈြသူလေးက တခွားတဈယောကျနဲ့ သစ်စာဖောကျနတေယျဆိုတဲ့ အဖွဈအပကျြမြိုးလောကျ ဘယျအဖွဈအပကျြကမှ ကွကှေဲစရာ မကောငျးပါဘူး။
ကိုယျနဲ့တှရေ့ငျတော့ အကောငျး၊ နောကျကှယျမှာတော့ တခွားတဈယောကျနဲ့ ကိုယျထကျတောငျ ကွညျနူးနသေေးတယျ ဆိုတာမြိုးက တှေးမကွညျ့ရဲလောကျအောငျ ဆိုးရှားလှနျးလှပါတယျနျော။
အကယျ၍ ခဈြသူလေးကို အံ့သွသှားစဖေို့ သူမသိအောငျ သှားတှကေ့ာမှ သူကတော့ တခွားတဈယောကျနဲ့ ခဈြကွညျနူး တဈတီတူးနတေဲ့ မွငျကှငျးကို မကျြဝါးထငျထငျတှလေို့ကျရရငျ သငျဆိုရငျ ဘာလုပျမယျလို့ တှေးမိသလဲ
ဒီအဖွဈအပကျြကို ကိုယျတှကွေုံ့ခဲ့ရသူကတော့ Ken Wong ဆိုတဲ့ လူငယျလေးပါပဲ။ Ken Wong ဟာ ဇှနျလ ၄ ရကျနမှေ့ာ ကရြောကျတဲ့ ခဈြသူကောငျမလေး မှေးနအေ့တှကျ ပနျးစညျးလေးကိုငျပွီး surprise လုပျဖို့အတှကျ မသိအောငျ ကောငျမလေးတိုကျအောကျကို သှားခဲ့ပါတယျ။
ပနျးစညျးတောငျ ရိုးရိုးမဟုတျဘဲ ပိုကျဆံတှထေညျ့ထားတဲ့ ပနျးစညျးလေးပါတဲ့….
ဒါပမေဲ့လညျး အိမျအောကျ ကားပါကငျကို ရောကျတဲ့အခါ Ken Wong ကို သူခဈြလှပါခညျြရဲ့ဆိုတဲ့ ကောငျမလေးက တခွားကောငျလေးကို ခှပွီး အကွာကွီးဖကျကာ ကွညျနူးနတေဲ့ မွငျကှငျးလေးက ဆီးကွိုလို့နခေဲ့ပါတယျ။ ရငျဝဆောငျ့ကနျလိုကျသလိုပါပဲ။
Surprise လုပျမှာဆိုတော့ အစောကွီးကတညျးက Ken Wong က သူ့ဖုနျးနဲ့ ဗီဒီယိုရိုကျကာ မှတျတမျးတငျဖို့ကို တဈခါတညျးပွငျဆငျသှားခဲ့တာပါ။ ဒါကွောငျ့လညျး ဒီအဖွဈအပကျြတဈခုလုံးကို မှတျတမျးတငျနျိုငျခဲ့တာပေါ့။
အစကတော့ အံ့သွပွီး မယုံကွညျနိုငျသလိုဖွဈကာ ရယျနခေဲ့ပမေယျ့လညျး ခဏအကွာမှာပဲ ခံစားခကျြတှေ ထိနျးမရတော့ဘဲ မကျြရညျတှေ အလိမျးလိမျးကကြာ ကွကှေဲပါတော့တယျ။
ဒီအဖွဈအပကျြကို Ken Wong ကိုယျတိုငျ Twitter မှာ တငျထားခဲ့တာဖွဈပွီး သူ့ရဲ့ Tweet post လေးနဲ့တကှ ပွနျလညျမြှဝပေေးလိုကျရပါတယျ။
“ယောက်ျားလေးတိုင်း သိထားဖို့ ကိုယ်ဝန်ဆောင် မိန်းကလေးတွေအပေါ် မလုပ်သင့်သော အချက် (၁၄) ချက်”